Imbiki Herilaza: “Atao aloha ny fifidianana” | NewsMada
“Zavatra roa no azo atao. Tsy maintsy miainga amin’ny lalàna isika. Eo ny lalàna 2014-020 izay momba ny vondrombahoakam-paritra itsinjaram-pahefana. Voalaza amin’izany ny momba ny kaominina sy ny fifidianana kaominaly.”
Izay ny fanazavan’ny mpahay lalàna, Imbiki Herilaza, ny amin’ny fifidianana ben’ny Tanàna sy ny fifidianana mpanolotsain’ny Tanàna, hatao amin’ny 27 novambra ho avy izao, izay nahabe resaka ny sasany noho ny hoe fahavitsian’ireo mpirotsa-kofidina.
Aorian’izay lalàna momba ny kaominina izay, eo koa ny lalàna 2018-008 milaza ny fepetra ankapobeny momba ny fifidianana. Farany, ny didim-panjakana 2019-1541 tamin’ny14 aogositra 2019, mampiantso ny mpifidy amin’ny fifidianana kaominaly.
Fiantsoana ny mpifidy manerana an’i Madagasikara momba ny fifidianana kaominaly ny andininy voalohany amin’io didim-panjakana io. Raha ohatra hita fa tsy feno ny fari-piadidiam-pifidianana, izany hoe: mety hisy fari-piadidiam-pifidianana tsy misy kandidà.
Ny dikan’izay: tsy maintsy alefa aloha ny fandatsaham-bato amin’ireo fari-piadidiam-pifidianana izay misy kandidà. Amin’ny manaraka, mandeha ny fifidianana manokana amin’ny ampahany.